Ezypta: Antso ho fahatsiarovana an’i Saddam Hussein · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2008 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Italiano, English
Amin'izao tsingerintaona faharoa namonoana ny filoha Irakiana teo aloha Saddam Hussein izao, ary noho ny fiaraha-mientan'ny fiaraha-monina Irakiana any Kairo, dia niantso hanao hahatsiarovana ny Filoha irakiana teo aloha ny antoko politika dimy any Ezypta.
Taorian'ny nanatsongana lahatsoratra tao amin'ny Gazety Al Youm 7, no nanoratra ny Ezypsiana iray:
Mahazo mino ahy ianareo na tsia fa te-hanome voninahitra mpamono olona mpampihorohoro tahaka an'i Saddam izay mieritreritra ny tenany ho karazana mpaminany na andriamanitra ry zareo. Eritereto hoe hitondra an'i Ezypta, hono, ireto antoko ireto indray andro any, ho tahaka ny ahoana re ny fomba fitondrany amin'izany fotoana izany e! Ny tena azo atokisna dia hanaraka ny dian'i Saddam – “ilay tia tanindrazana mahery fo” – araka ny iantsoany azy izy ireo. Inona moa izao no eritreretin'ny firenen-kafa antsika raha mahita izao vaovao izao izy ireo? Fa aiza ny mpitandro ny filaminana? Fa nahoana moa no tsy samborina ireo? Ankamantatra ity: iza moa no tena halan'izy ireo? Ny filoha Mubarak no tsy tiany.
Atoa Filoha, ho ela fitondrana ity firenena ity anie ianao, ianao no tsara kokoa.
Naneho ny heviny tamin'ity tranga iray ity ihany koa i Voice of Egypt :
Fa iza ireo olona ireo? Efa nisy naheno ny momba ireo ve ianareo? Naninona no tsy heno mihitsy ny feon'izy ireo tao amin'ny fanoherana fa tsy maninona, Nahoana izy ireo no manohitra ny zava-drehetra raha toa ka manao famelabelaran-kevitra ho fahatsiarovana sy ho fanajana olon-doza tahaka an'i Saddam Hussein? lazainy fa maritiora hoe izy, mahery fo, ary olomangan'ny fahazakana (mankany amin'ny hevitry ny fandeferana). Tsy ho gaga aho raha mitaky ny hananganana tsangambato eo amin'ny Lalana Ramses izy ireo. Tsy mbola naheno antoko politika nanao famelabelaran-kevitra miresaka ny momba ny demaokrasia, ny lalàna momba ny fahamehana, ny voafonja, na ny tsy fisian'ny mofo dipaina akory izahay hatramin'izao.
Andriamatoa isany … mpitarika ireo antoko ireo … mahamenatra ianareo!